01/06/2019 Yan Naing 0
မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ရည်းစားကိုယ် သည်းနေအောင် မချစ်ပြသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူတစ်ပါးကို မလိမ်ညာဘဲ တကယ်အချစ်စစ်နဲ့ချစ်တာက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုတာထက်ပိုပြီး ကိုယ်ချစ်နေတာကို သည်းသည်းလှုပ်မဖော်ပြသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုမဖော်ပြသင့်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်ကတော့ ဒီလိုပါ။ လူတိုင်းဒီလိုဖြစ်မယ်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံး အရာတွေကို ဖော်ပြပေးထားတာပါနော် Continuous reading
ခွန်းဆင့်နေခြည်နဲ့ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကို ပြန်ရှင်းလိုက်တဲ့ ဝေကြီး လက်ရှိအချိန်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ တေးသီချင်းပေါင်းများစွာ ရေးသားနိုင်ပြီး ရေးလိုက်တဲ့ သီချင်းတွေကလည်း ပရိသတ်ရဲ့ ရင်ထဲကို ထိစေနိုင်လောက် ရေးသားစွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့ တေးရေးဆရာဝေကြီးကတော့ ခွန်းဆင့်နေခြည်နဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းကိစ္စမှာ နားလည်မှုလွဲတာဖြစ်ပြီး အခုအချိန်မှာ အေးဆေးဖြစ်ကြောင်း We Media နဲ့ Continuous reading
သုံးရက်ကြာပျောက်ဆုံးတဲ့ ကလေး (၂)ဦး ကို သေဆုံးလျက်အလောင်း အဖြစ်ပြန်တွေ့
01/06/2019 lin htet 0
သုံးရက်ကြာပျောက်ဆုံးတဲ့ ကလေး (၂)ဦး ကို သေဆုံးလျက်အလောင်း အဖြစ်ပြန်တွေ့ ဖလမ်း-ကလေးလမ်းမှာ သုံးရက်ကြာပျောက်ဆုံးတဲ့ (၂)ဦးတို့အလောင်းကို ဒီမနက်ပြန်တွေ့ဖလမ်းမြို့နဲ့ ကလေးမြို့ကားလမ်းကြားမှာ ဆိုင်ကယ်စီးရင်း သုံးရက်ကြာပျောက်ဆုံးတဲ့ ဖလမ်းမြို့နယ် Hnahthial ရွာသားနှစ်ဦးရဲ့အလောင်းကို ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့မှာ ပြန်တွေ့သွားတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ ဖ လမ်း မြို့ နယ် Hnahthial Continuous reading
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေတဲ့သူများ သိစေရန်
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေတဲ့သူများ သိစေရန် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးကို… ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေတဲ့ ပိုစ့်တွေမှာ တစ်ခုချင်းလိုက်ဖြေရှင်းနေရင်… တိုးမပေါက်မှာစိုးလို့… ပိုစ့်တင်ပြီး ရဟန်းရှင်လူအပေါင်း သိသာနိုင်စေဖို့ ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ် ။ ၁ ။ တရားပွဲတစ်ပွဲကို ဘယ်လောက်ရမှ ဟောတယ်ဆိုပြီး အပုတ်ချတယ် ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်မှာ သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့ တရားပွဲ ဆယ်ပွဲထက်မနည်း Continuous reading
မြန်မာလုပ်သား ၅ သိန်းအထိ ဂျပန်က တရားဝင်ခေါ်ယူမည်
မြန်မာလုပ်သား ၅ သိန်းအထိ ဂျပန်က တရားဝင်ခေါ်ယူမည် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ အသိအမှတ်ပြု one heart ကော်ပရေးရှင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အသိအမှတ်ပြု ပြည်ပလုပ်သားစေလွှတ်ရေး ကုမ္ပဏီငါးခုတို့ပေါင်းစပ်ကာ ဂျပန်တွင် မြန်မာများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် မေ ၂၉ ရက်နေ့က ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်တွင် MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်…… အခမ်းအနားတွင် ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် Continuous reading
အပျိုရည် လူပျိုရည် ပျက်မှာကို မကြောက် တော့တဲ့ ( 21 ) ရာစု အမှန်တရား .. လိင်မှု ကိစ္စဟာ ပွင့်လင်း မြင်သာလာပြီး အချစ်စစ် ဆိုတာ ဈေးကြီး လာတယ် ။ အပျိုရည် လူပျိုရည် ပျက်မှာ ကြောက်ဖို့ ထက် Continuous reading
ဒွေးရဲ့ ပွေရှုပ်မှုတွေကြောင့် အိပ်ဆေးအကြိမ်ကြိမ်သောက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြတဲ့ မမိုးမိုး
ဒွေးရဲ့ ပွေရှုပ်မှုတွေကြောင့် အိပ်ဆေးအကြိမ်ကြိမ်သောက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြတဲ့ မမိုးမိုး မမိုးမိုးနဲ့ ဒွေးနဲ့ဟာ အချိန်တွေအကြာကြီး အေးအတူပူအမျှလက်တွဲလာခဲ့တဲ့ မောင်နှံတွေဖြစ်သလို မိုးမိုးဟာ ဒွေးကို မရှိရှိတာနဲ့လုပ်ကိုင်ရှာဖွေကျွေးမွေးပြီး ပညာသင်ပေးခဲ့သလို ပါရမီဖြည့်ပေးခဲ့သူပါ။ ဒွေးကလည်းမိုးမိုးကို မင်းသားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပြီး ရှာဖွေကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုးမိုးဟာ လူသာကောင်းကောင်းနေရပေမယ့် စိတ်မချမ်းသာခဲ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒွေးရဲ့ ပွေရှုပ်မှုတွေကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရပြီး Continuous reading
နူတ်ဆက်ခြင်းက သင့်အသက်ကို မကယ်တင်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်ပါ့မလဲ …..
နူတ်ဆက်ခြင်းက သင့်အသက်ကို မကယ်တင်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်ပါ့မလဲ ….. အမေရိကန်နိုင်ငံက တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ …. ။ သားသတ်စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အလုပ်ချိန်ပြီးခါနီး အိမ်မပြန်ခင်လေးမှာ ခုတ်ထစ်ပြီး အမဲသားတွေကို မပုတ်သိုးအောင် တန်းစီချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အအေးခန်းထဲကို ဝင်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဝင်ပေါက်သံတံခါးကြီးဟာ ရုတ်တရက်ပိတ်သွားတယ် …. ။ တံခါးကြီးဟာ Continuous reading
သင့်ကို ရူးရူးမူးမူးချစ်ပါတယ်ဆုိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးတောင်မှ သင့်ကိုစွန့်ခွာသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများ… အမျိုးသမီးတွေဆိုတာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပီးခန့်မှန်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာ အမျိုးသားအများစုသိထားကြပါတယ်။ ဒါမဲ့ အဲ့ဒါကလဲ သူတို့ထွက်မသွားခင်အချိန်တစ်ခုတည်းအထိပါပဲ။ သင်အလုပ်မှာအလုပ်လုပ်နေစဉ် သူတို့ကတံခါးကိုဆောင့်ပိတ်ပီး သင့်ဘဝထဲကနေထာဝရ ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တာနဲ့ပတ်သတ်ပီး အကြောင်းရင်းတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ….. ။ ၁၀။သင့်ကိုမှီခိုလို့မရနိုင်ဘူးလို့သူမခံစားရတယ်။ အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ သူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတန်ဖိုးထားနှစ်သက်တာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ်မှီခိုအားထားချင်တဲ့စိတ်လေးကလဲရှိတတ်ပါတယ်။ ပီးတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာ အမျိုးသားကိုအင်မတန်လိုအပ်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ Continuous reading
Miss Universe Myanmar 2019 Winner ဆုရရှိသွားတဲ့ ဘားအံအလှမယ် ဆွေဇင်ထက်
Miss Universe Myanmar 2019 Winner ဆုရရှိသွားတဲ့ ဘားအံအလှမယ် ဆွေဇင်ထက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် Miss Universe Myanmar ဆု ကိုတော့ ဘားအံကိုယ်စားပြု အလှမယ် ဆွေဇင်ထက် က ရရှိပိုင်ဆိုင်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ပြည်ပနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Miss Continuous reading